Nhau - Iyo tepi yekukanda inoumbwa nematanho mazhinji eakasarudzika fiberglass yakaisirwa resini.
Iyo yekukanda tepi inoumbwa nematanho akaturikidzana eakasarudzika fiberglass akaiswa mushonga nebwe.
1.Kuomarara kwepamusoro uye kurema kurema: Iko kuomarara kwechipenga mushure mekurapa inguva makumi maviri iya yechinyakare plaster. Iyi ficha inovimbisa kutendeseka uye kusimba kugadziriswa mushure mekugadzirisa chaiko. Iko kwekugadzirisa zvinhu zvidiki uye huremu hwakareruka, zvakaenzana ne1 / 5 yehuremu hwepurasita uye 1/3 yeukobvu iyo inogona kuita kuti nzvimbo yakakanganiswa ive nehuremu hushoma, kudzikamisa mutoro pane unoshanda muviri mushure mekugadzirisa, gonesa kutenderera kweropa uye kukurudzira kupora.
2. Inotenderera uye yakanaka mweya kubvumidzwa: Iyo bhandeji inoshandisa yepamusoro-soro mbichana mbichana uye yakasarudzika mesh kuruka tekinoroji iyo ine yakanaka mweya kubvumidzwa.
3.Kurumidza kuomesa kumhanya: Iyo yekuomesa maitiro ebhandeji inokurumidza. Inotanga kuomesa 3-5 maminetsi mushure mekuvhura pasuru uye inogona kutakura huremu mumaminetsi makumi maviri apo bhanhire repurasita rinotora maawa makumi maviri nemana kuti riomese zvizere uye kutakura huremu.
4. Yakanaka X-ray transmittance: Iyo bhandiji ine yakanakisa radiation radiation kukwana uye iyo X-ray mhedzisiro yakajeka iyo inobatsira chiremba kuti anzwisise kupora kweanobatwa mitezo chero nguva panguva yekurapa maitiro.
5.Kudzivirira kwemvura kwakanaka: Mushure mekunge bhanji raomeswa, pamusoro pacho panotsvedzerera uye mwero wekutora mwando uri 85% pasi pane purasita. Kunyangwe kana gumbo rakakanganiswa rakafumurwa nemvura, rinogona kunyatsoona kuti nzvimbo yakakanganiswa yaoma.
6. Nyore kushandisa, kusanduka, yakanaka plasticity
7.Nyaradzo uye chengetedzo: A. Kune vanachiremba, (chikamu chakapfava chine mukana wekuchinjika) ichi chiitiko chinoita kuti zvive nyore uye zvinoshanda kuti vanachiremba vashandise. B. Kune murwere, bhandeji rine chidiki chidiki uye harizoburitse kusagadzikana zviratidzo zveganda kuomarara uye kuvaviwa mushure mekunamirwa bhanhire raoma.
8.Hwakasiyana-siyana hwekushandisa: orthopedic yekunze fixation, orthopedics ye orthopedics, anobatsira anoshanda anoshanda emagetsi eprostheses uye ekutsigira maturusi. Yemunharaunda yekudzivirira stent mubazi rekupisa